Microsoft inotangisa chirongwa chekuvandudza cheSurface yakafanana neApple's | IPhone nhau
Microsoft inotangisa chirongwa chekuvandudza cheSurface yakafanana neApple
IPad nhau | | Kupikisana, Noticias
Kwenguva yakati ikozvino, zvinoita sekunge zvirongwa zvekuvandudza zviri kusvika kumagetsi zvigadzirwa. Imwe yekutanga kuivhura yaive Apple, payakazivisa mitsva iPhone 6s uye 6s Plus mamodheru, umo vashandisi vaigona kuchinja nharembozha yavo gore rega kana makore maviri ega ega. zvinoenderana nemari yemwedzi yatinoda kubhadhara. Chirongwa ichi chakasvika mazuva mashoma apfuura kuSpain, uye zvinoenderana nezvatakaona, izvi zvirongwa zvinodhura kupfuura zvaunogona kufunga.
Asi haasi iye ega. Nguva pfupi yapfuura, Samsung yakatanga chirongwa chakafanana, parizvino inongowanikwa muUnited Kingdom nevashandisi veSamsung vanogona kuchinja zvishandiso zvemhando ichangoburwa gore rega. Kusiya munda wenhare, Microsoft ndiyo yekutanga inogadzira kuisa fomu iyi pamahwendefa kana maSurface PC.
Ichi chirongwa chinonzi Microsoft Surface Nhengo chinobvumidza vese vashandisi veMicrosoft kuti vavandudze michina yavo gore rega, vachibhadhara chete mwedzi wega wega. Muchokwadi, chirongwa ichi chakafanana chaizvo neicho Apple yakatangisa neiyo iPhone 6s. Iyi yekuvandudza chirongwa ichave ichiwanikwa mune ese matatu mavhezheni eSurface uye isu tinogona gura iyo mubhadharo kuita 18, 24 uye 30 mwedzi, mitengo iri seinotevera:
Surface 3 - $ 32.99 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu, $ 30 pamwedzi kwemwedzi makumi maviri nemana, uye $ 37.99 pamwedzi kwemwedzi gumi nesere.
Surface Pro 4 - $ 51.99 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu, $ 30 pamwedzi kwemwedzi makumi maviri nemana, uye $ 58.99 pamwedzi kwemwedzi gumi nemasere.
Bhuku Repamusoro - $ 79.99 pamwedzi kwemwedzi makumi matatu, $ 30 pamwedzi kwemwedzi makumi maviri nemana, uye $ 89.99 pamwedzi kwemwedzi gumi nesere.
Midziyo yese inowanikwa kuburikidza neiyi fomu, inosanganisira zvese zvishongedzo. Panyaya yeSurface 3 ichauya nekiyibhodhi yakavharidzirwa, seSurface 4 iyo ichauyawo nepeni, iyo ichave iri kuwanikwa paSurface Book. Parizvino iyi nzira nyowani yekuwana uye kunakidzwa neMicrosoft Surface zvigadzirwa inogumira kuUnited States uye hatizive kana ichawedzera kune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Microsoft inotangisa chirongwa chekuvandudza cheSurface yakafanana neApple
Mhoroi, ndiri kukutaurirai kuti Apple uye Samsung zvirongwa zvekuvandudza zviri muChile izvozvi, handizive kana iri rese reLatin America. Kwaziso
Kutenda neruzivo. MuSpain iyo yandinoziva, iyo Samsung chirongwa haisati yasvika.
Pindura kuna Ignacio López
Apple Pay inosvika makumi matatu emamwe mabhangi uye makadhi echikwereti muUS